Guddoomiye Cawad oo ka digay in Xarumaha Golaha Shacabka si gaara loo isticmaalo – Kalfadhi
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa shirjiraa’id, oo uu suxufiyiinta ugu qabtay Muqdisho maanta, waxa uu uga digay Golaha in Xarunta Filla Hargeysa ay isticmaalaa Xildhibaannada kala aragtida duwan. Warqad uu u qebiyey suxufiyiinta ayaa waxaa ku qoran 7 qodob, oo intooda badan ah digniin ku socota Xoghayaha Golaha Shacabka. Waxa uu Guddoomiye Cawad ku yiri warqaddiisa “Xildhibaannadu uma isticmaali karaan kullamadooda siyaasadeed Xarunta Filla Hargeysa”.
Xarunta Golaha Shacabka ayuu sidoo kale Guddoomiye Cawad uga digay Xoghaynta iney koox ka tirsan Xildhibaannada Golaha u isticmaasho danteeda gaarka ah. “Waa in Xarunta Golaha Shacabka laga ilaaliyaa in koox aragti gaar ah wadata ay u adeegsato hannaan uusan isku waafaqsaneen Guddoonka iyo Xafiiska Golaha” ayuu Cawad ku yiri Warqaddiisa. Filla Hargeysa waxay Xildhibaannadu u isticmaalaan kulamada ka baxsan kuwa Golaha, oo Xarunta Golaha Shacabka lagu qabto.
Laakiin, Guddoomiye Cawad waxa uu Xoghaynta Golaha u ogolaaday iney ka shaqeyn karaan hawlihii Baarlamaan ee ay wadeen ka hor khilaafka hadda u dhaxeeya Guddoonka Golaha Shacabka. “Xoghayahu waxa uu socodsiin karaa hawlaha ka horreeyey khilaafka, mana fulin karo go’aanno maamul iyo maaliyadeed, oo uusan Goluhu ka wada tashan” ayuu yiri Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka.
Waxa uu qodobka 5-aad ee warqadda uu u qeybiyey wariyayaasha ku caddeeyey inuusan aqoonsaneen Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, kaas oo uu Guddoomiyaha Golaha, Maxamed Mursal, sheegay inuu sii wadan karo shaqadiisa. “Ma aqoonsani Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda oo la kala diray 28-kii Nofeembar, 2018” ayuu yiri Cawad. Waxa uu u soojeediyey Mursal iney ka wada shaqeeyaan Guddi ku-meel-gaar ah, oo ka sii shaqeeya Miisaaniyadda Dowladda ee 2019-ka.
Cawad waxa uu Xildhibaannada Golaha ugu yeeray iney ilaaliyaan sharafka iyo xushmadda Golaha. Waxa uuna, sidoo kale, laamaha amniga ee Dowladda iyo AMISOM ugu baaqay iney iyana ilaaliyaan hantida iyo ammaanka Xarunta Golaha Shacabka.